ImiSebenzi - UKUPHAKWA KWAKHONA KONKE KUNYE NOKUprinta, LTD
Sisoloko sifuna italente entsha yokukhulisa usapho lwethu kwi-EPP Ukuba unomdla wokufaka isicelo kwi-EPP, nceda ufake ulwazi lwakho apha ngezantsi.
Kwi-EPP, sizabalazela ukuba yinkokeli phakathi kweenkampani zokupakisha eziguqukayo e-China nakwamanye amazwe. Sisoloko sikhuthaza abasebenzi bethu ukuba bacele umngeni kule meko sikuyo ngoku. Unathi, unikwe amandla okuba ungacingi nje ngokuphumelela kwezimvo ekupakisheni okuguqukayo, kodwa ukubazisa ebomini ngoncedo lweqela labaqeqeshi abanamava nabanamava abasuka kwishishini lokupakisha eliguqukayo.
Inkampani kunye neNkcubeko
Kwi-EPP, ukusebenzisana kunye nokuphuculwa okuqhubekayo sisiseko sokuzibophelela kwethu kulwaneliseko lwabathengi. Siyazingca ngokuba nenkcubeko yokusebenzisana, ukwenza izinto elubala kunye nobunkokheli ngomzekelo, obangele ukuba indawo ekumgangatho ophezulu yokusebenza yabasebenzi bethu ibe namazinga aphezulu emveliso yabasebenzi nolwaneliseko.
Siyakholelwa ekubeni abasebenzi bethu zezona asethi zethu zibalulekileyo nelitye lembombo ekuphumezeni amanqanaba aphezulu okwoneliseka kwabathengi. Ixabiso le-EPP kwaye liyayixabisa iyantlukwano kwaye izinikele kwinkcubeko engenakho konke ukucalulwa. Kwi-EPP, uyakufumana ithuba lokusebenza nezinye zeetalente ezilungileyo kwishishini lokupakisha eliguqukayo.